Maitiro ekuwedzera Instagram kuTik Tok  - Luso Gamer
Maitiro ekuwedzera Instagram kuTik Tok 
Instagram ndiyo yaive yekutanga den yezera rechidiki kusvikira iyo TikTok craze yabvisa zita iro. Iwe unoziva here kuti iyo Instagram profile inogona kuwedzerwa kune yako TikTok account? Saka tichazokuudza kuti ungawedzera sei Instagram kuTok Tok.
Iwo maviri akanyanya kutarisisa-ekubata mapuratifomu evachiri kuyaruka venguva vanotakura mamwe maforakti ayo akasarudzika kuchikamu chimwe nechimwe. Imwe neimwe ine yayo mashandiro uye nesimba. Kana iwe ukafunga kubayira imwe nekuda kwevamwe. Pane mukana wakanaka chaizvo wekuti unopotsa zvakawanda nekusashandisa imwe.
Nzira yekuwedzera sei Instagram kuna Tik Tok?
TikTok ndiyo yekuenda-kune sarudzo yemapfupi uye inobata mitambo yemavhidhiyo. Idzi dzinonakidza uye dzinopamhama pfupi zvikamu zviri nyore kugadzira uye kurodha pane app.
Iko kukumbira kunotakura mafomu ese ezvinyorwa uye inokutendera kuti ufare chero nguva neiri risingaperi rwizi rwezvinoshamisa uye zvinosetsa zvipfupi zvikamu. Zvese zvinoenderana nekuravira kwako uye zvaunoda.
Kunyangwe Instagram yakauya pamberi peiyo Tik Tok. Izvo zvinotevera huchenjeri hwakasiyana hwekugadzirwa kwezvinhu uye kugovana. Iine mufananidzo wayo unoshamisa uye mafirimu evhidhiyo. Icho ichiri chirongwa chepamusoro cheiyo yekuvandudza zvemukati nekugovana.
Asi TikTok yega yakakwanira kukuchengeta iwe unobatirana kwenguva isingaperi yenguva. Zvakadaro, vanhu vanoda kupa imwe nguva kune yavo Instagram zvakare. Saka kana iwewo uchibvunza "Ndinga wedzera sei Instagram yangu paTikTok yangu?
Isu tinokutora iwe kuburikidza nemaitiro. Iva yako nhare mbozha Android kana mudziyo kana apuro iPhone yaunotakura. Mhinduro yekuti ungawedzera sei insta kune tik tok iri nyore.
Iwe unogona kubatanidza ese maviri maapp. Vamwe vanhu kunze uko vava kutoshandisa iyo TikTok app kugadzira Instagram nyaya uye mamiriro epasi. Nekudaro, vazhinji havazivi nezve chokwadi chekuti mapepa aya maviri anokwanisa kubatana kubva paTik Tok papuratifomu.
Usati watanga kubatanidza maakaunti pane idzi maviri maapp. Iwe unofanirwa kuziva kuti iwo maviri akasiyana maseseji anoshanda uye anoshanda nemakambani akasiyana kwazvo. Insta ndeye Facebook uye Tik Tok ikambani yeChinese.
Kuti ubatanidze Instagram uye TikTok, iwe uchafanirwa kuisa zvese zvirongwa pafoni yako. Sezvo iwe uri pano. Iwe unogona kunge uchitove neese maviri maakaunti. Iye zvino wave kugadzirira kuenda kuburikidza nemaitiro. Saka uku ndiko kubatanidza Instagram kuTikTok.
Aya ndiwo matanho. Vaitei ivo mukutevedzana kwakapihwa uye muchave imomo pasina nguva.
1 Vhura iyo Tik Tok app uye tora pane iyo profil icon. Iyo iri kurudyi kona kona kamwe iwe uchinge uine application kuvhurwa pane yako kifaa screen.
2 Iye zvino tora pane Horafa sarudzo sarudzo kana iwe uri kuburikidza nedanho rekutanga.
3 Pano iwe unogona kuona iyo sarudzo yekuwedzera yako Instagram uye YouTube profiles. Tinya pane iyo Wedzera iyo tebhu.
Iye zvino iwe uchaendeswa kune yako Instagram Login. Zadza zvinyorwa zvinosanganisira nhamba yako yefoni, zita remazita, kana email, uye password. Wobva wadzvanya iyo yekunyora tebhu. Iwe unozoendeswa kune yako nhoroondo kuburikidza neTikTok.
Zvino tora pa "Mvumo"? sarudzo yekubvumidza account yako kuwana iyo Insta account.
Iyi ndiyo nzira yekuwedzera nayo Insta kune tik tok pane yako runhare mbozha. Iye zvino unogona kugovera yako vhidhiyo zvisikwa pafoni yako zvakananga kune Insta kubva kuTikTok app. hapana chikonzero chekufamba nenzira refu yakashungurudza nzira yekuchinja pakati pezvose zvinoshandiswa.
Nzira yekubatanidza iyo Yechipiri kana Bhizinesi Instagram Akaunti kuTikTok
Iwe unogona zvakare kuita izvi. Vanhu vari kuyedza kubatanidza avo ebhizinesi Instagram account kana avo echipiri eemaakaunti vangatarisana nematambudziko. Inonyanya kuzivikanwa yeiyo isiriyo password password. Zviri nyore kugadzirisa. Nekuita izvi, nzira yacho ine inotevera matanho akareruka.
Enda kune yako yechipiri kana bhizinesi account pane yako Instagram.
Tinya pane kuchengeteka
Tinya ”˜Gadzira password yeiyi account' sarudzo
Ipa password kune iyo account.
Iye zvino shandisa izvi zvinyorwa kuti ubatanidze kune Instagram kubva kuTikTok. Saka iyi nzira yekubatanidza Instagram neTikTok kubva kubhizinesi kana yechipiri Instagram account.
Sei Kubvisa Instagram kubva TikTok
Nekuda kwechikonzero chero chipi chaunoda kubatanidza maakaundi maviri chii chaunofanira kuita? Mune ino kesi, iwe uchafanirwa kudzokorora maitiro akataurwa mune yekutanga kesi.
Pano pane kudzvanya iyo "Wedzera Instagram"? sarudzo. Iwe uchafanirwa kubaya iyo "Unlink"? bhatani. Ipapo iyo TikTok app inozodzima yako Instagram ruzivo.
Saka kuburikidza nekushandiswa kwematanho aya maitiro ekuwedzera Instagram paTik Tok rinova basa riri nyore. Zvino chiite uye ita kuti hupenyu hwako huve nyore.
Categories Blog Tags Sei Ini Ndinowedzera Ini Instagram Rangu TikTok, Maitiro Ekuwedzera Insta kuna Tik Tok, Nzira yekuwedzera sei Instagram Bhizinesi Akaunti kuTikTok, Maitiro Ekuwedzera Instagram kuna TikTok, Sei Kubvisa Instagram kubva TikTok Post navigation
Chigunwe PaApp Apk Dhawunirodha YeAndroid 
VidMix Apk Dhawunirodha 2022 Yemahara Ye Android [Izvino Vhezheni]